Buy Cloud CCTV (100,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ရန်ကုန်နဲ. မန္တလေးမှာ အင်တာနက်ဟာ နေရာတိုင်း ဖြစ်လာပါတယ်။
Wifi တွေ လိုက်ချိတ်တဲ Service တွေနဲ. အိမ်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ
Fttx Service တွေကြောင့် အိမ်တိုင်းနီးပါးမှာ အင်တာနက် တပ်ချင်ရင်
တစ်လ ၅သောင်းတောင် မကုန်တော့ပါဘူး။
SD ကဒ်တွေ ပျက်စီးတဲ ဒုက္ခ၊ Sd ကဒ်ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ကြည့်လို.
ကြည့်မရတဲ ဒုက္ခတွေကို Cloud CCTC က ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
Rocket မှာတေ့ာ ပထမဆုံး အနေနဲ. Zmodo Cloud CCTV လေးကို
Night Sensor ပါရှိပြီး 720 hd resolution နဲ. ဓာတ်ပုံ Video များ ရိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြား တစ်နေရာကနေ လှမ်းပြောနိုင်တဲ System ပါရှိပြီး သံတစ်ချောင်း ရှိရုံနဲ.
wide angle ပါတာကြောင့် တစ်နေရာမှာ တပ်ဆင်ရုံနဲ. တစ်အိမ်လုံးကို ကြည့်နိုင်မှာပါ။
Cloud Service ကို Free အနေနဲ. ၃၆နာရီ ပေးထားပြီး
တစ်ပတ်စာ သိမ်းခိုင်းမယ်ဆိုရင် တစ်လကို ၅ဒေါ်လာ ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်လစာ သိမ်းခိုင်းမယ်ဆိုရင် တစ်လကို ၁၀ဒေါ်လာ ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Motion Detection လည်း ပါရှိပြီး Motion တစ်ခုခု ရှိတာနဲ.
အပိုင်းဖြတ်အနေနဲ. မှတ်သားပြီး Cloud မှာ auto သိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – ၁သိန်း (100000) kyats
မှတ်ချက် – ဝယ်ယူရန် အိမ်မှာ အင်တာနက် တပ်ထားဖို. လိုသည်။
TOSHIBA LED TV 220V
i phone 7+ အော်နားကျပ်လေး
အမည်: Cloud CCTV